यी हुन्, मुख छोपेर अश्लिल फिल्म बनाउने पाकिस्तानकी पोर्न स्टार ! उनि भन्छिन्, ‘पाकिस्तानले ममाथि गर्व गर्नुपर्छ’ – Etajakhabar
यी हुन्, मुख छोपेर अश्लिल फिल्म बनाउने पाकिस्तानकी पोर्न स्टार ! उनि भन्छिन्, ‘पाकिस्तानले ममाथि गर्व गर्नुपर्छ’
काठमाडौं – पाकिस्तानकी एक पोर्न स्टारले अनेकौ चर्चा पाईरहेकी छिन् । पोर्न उद्योगमा दिनप्रति दिन नयाँ नयाँ व्यक्तिले स्थान पाईरहेका छन् । यो उद्योगमा लागेपछि अकुत सम्पत्ति कमाउने भएकाले विभिन्न देशका महिलाहरु यसमा आकर्षित छन् । हालै पाकिस्तानकी एक्ली पोर्न स्टारको नाम सार्वजनिक भएसँगै पाकिस्तानमा बबाल मच्चिएको छ । अमेरिकामा पाकिस्तानी पोर्न स्टार नादिया अलिको एक अन्र्तवार्ता सार्वजनिक भएपछि उनी रातारात चर्चाको शिखरमा पुगिन् । पाकिस्तानले नादियालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ र यहाँका धेरैजसो मानिसहरु उनलाई घृणा गर्छन् तर पनि उनका प्रशंसकहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।
उनी आफू पाकिस्तानी पोर्न स्टारको रुपमा चर्चित भएकोमा दङ्ग छिन् । उनी भन्छिन्, ‘मैले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेर सेली राख्नसक्थें र चर्चित हुन सक्थें । तर यसो गर्दा मलाई सन्तुष्टि मिल्दैन ।’
आफू चर्चित भएका कारण पाकिस्तानले यसमा गर्व गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा छ । ‘म तिव्र रुपमा चर्चित भइरहेकी छु । यसकारण पाकिस्तानले ममाथि गर्व गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।
आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टको बारेमा जानकारी दिँदै उनी भन्छिन्, ‘मैले ‘वुमन अफ द मिडल इस्ट’ नामक नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गरेकी छु । यो ओसामा बिन लादेनको पोर्न कलेक्सन जस्तै हो ।’
नादिया पोर्नस्टार बनेपछि पाकिस्तानका जनता उनीमाथि आक्रोशित छन् । थुप्रै कट्टरपन्थीले उनलाई देख्नेबित्तिकै मारिदिनेसमेत घोषणा गरेका छन् ।’ टिभी अन्नपूर्ण बाट
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण ०६, २०७४ समय: १:०५:०२